Ogaden News Agency (ONA) – Weeraradii lagu qaaday cadawga iyo gawaadhi lagaga gubay kamiin loo dhigay
Weeraradii lagu qaaday cadawga iyo gawaadhi lagaga gubay kamiin loo dhigay
Posted by ONA Admin	/ May 17, 2013
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ka dhacay deegano kamid ah dalka Ogaadeeniya ee ay Ethiopia gumaysato,dagaaladaasi oo lagaga xoraynayo gumaysiga Ethiopia dalka Ogaadeeiya ayaa udhacay sidatan;
Dagaal xoogan oo u dhexeeyey N/Hurayaash CWXO iyo Askarta gumaysiga oo ka dhacay 03/05/2013 deegaanka Dibiraweyne oo Dhagaxbuur katirsan ayaa waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 10 Askari waxaana lagaga dhaawacay 12 kale.
Kamiin ay ka xidheen Cutub ka tirsan N/hurayaasha ciidamada qalabaka sida ee JWXO 09/05/2013 kaylaaga magaalada Qabridahare ee xarunta gobolka Qoraxay ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga gubay halkaasi hal Baabuur oo ay saarnaayeen askar farabadan waxaan halkaasi ku basbeelay Baabuurkii iyo askartii saarnayd oo aysan waxba kabixin iyadoo lasheegayo in khasaare kalana uu soo gaadhay gaadiidkii lasocday Baabuurka lagubay.
20/04/2013 Dagaal ka dhacay Deegaanka lagu magacaabo Tirow oo Daratoole katirsan ayaa waxaa askarta mooraalka jabasan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
22/04/2013 Sammu oo iyana Daratoole katirsan dagaal ka dhacay ayaa Askarta gumaysiga Ethiopia waxaa lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale.
24/04/2013 kamiin ay ka xidheen NH/CWXO duleedka Bali-sareedo oo Gunagado katirsan ayaa waxaa halkaasi si indho la’aan ah usoo galay gaadiid ay saaraayeen askarta gumaysiga Ethiopia waxaana halkaasi lagu gubay Hal Baabur iyo Asakrtii saarnayd oo aysan waxba ka bixin.
Kamiin ay ka xidheen N/hurashaasha qalabka sida ee JWXO duleedka magaalada Galaalshe 01/05/2013 ayaa waxaa lagu gubay hal Baabuur oo ay saarnaayeen sodomeeyo kamid ah Askarta gumaysiga Ethoipia waxaa halkaasi ku basbeelay Baabuurkii iyo Askartii saarnayd oo aysan waxba ka bixin.
26/04/2013 Ballisareedo oo Gunagado katirsan ayaa waxaa lagu dilay 1 Askari oo kuwa gumaysiga Ethiopia ah waxaana lagu dhaawacay 1 kale.
08/05/2013 Shabeelow oo Gunagado u dhow dagaal ka dhacay waxaa askarta mooraalka jabasan ee gumaysiga Ehiopia lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawcay 2 kale.
09/05/2013 Weerar mir ah oo lagu qaaday fadhiisin ay askarta gumaysiga Ethiopia ku lahaayeen magaalada Gabagabo ayaa waxaa lagaga dilay weerarkaasi mirta ah 2 Askari.
13/05/2013 kax-dhabileey oo Godey udhw waxaa lagaga dilay askarta gumaysiga Ethiopia hal askari.
04/05/2013 Deegaanka lagu magacaabo Jeerinka oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay ayaa waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 1 kale.
04/05/2013 gudaha magaalada Fiiq waxaa Askarta gumaysgi Ethiopia lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
12/05/2013 weear qorshaysan oo ay ku qaadeen Cutub katirsan NH/CWXO fadhiisin ay askarta gumaysiga Ethiopia ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Dambarweyne oo Dhanaan katirsan ayaa lasheegayaa in halkaasi ay is kaga carareen askartii gumaysiga ee daganayd, ciidanka qalabka sida ee JWXO ayaa la wareegay xeradii ay ka careen askarta mooraalka jabasan ee gumaysiga Ethiopia, iyadoo halkaasi ay ka qaateen NH/CWXO qalab iyo saanad milatari oo aad u tirabadan, halka ay dab qabadsiiyeen wixii agab ahaa ee ay kaga tageen xerada.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka kala dhacay 01,04,07,08 iyo 13/05/2013 Deegaanada kala ah Yooca-dhaylay oo Shaygoosh udhow, San xasakule, Dudunka oo dhanaaan katiran, Dhalacad oo Dhiita katirsan, Banyare oo Qoriile udhow, Jugle iyo daris, Qoraxda oo Goday udhow, Cceelo-obo oo Galaalshe udhow, Faarwayne Dhagabuur udhow, Hoomey oo Godey udhow, Fariiqyada oo Baabili udhow iyo Hargaysa-yarey oo Qabridahar katirsan dagaaladaasi ayaa dhamaantood waxaa cadowga loogu gaystay khasaare balaadhan oo naf iyo maalba leh.